हामी कोरोना पछि भेट हुँदा विश्वमा विभेदको अन्त्य भएको हुनु पर्छ – माहुरी . Bee
पछिल्लो समय कोरोनाको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेहरुको संख्या अमेरिकामा ६१,६१८; वेलायतमा २६,०९७ नाघेको छ । अस्पतालाबाहेक केयर होममा थप ३ हजार भन्दा धेरै मृत्यु भएको कुरा आजको प्रेस ब्रिफिंगमा बताईएको छ । नेपालमा संक्रमित हुनेहरुको संख्या ५७ पुगेको कुरा बताईएको छ । संयोग नै मान्नु पर्छ कि नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट कसैको पनि मृत्यु भएको खबर छैन । बरु १६ जना कोरोना संक्रमितहरु निको भएर घर फर्किसकेका छन ।
तर कोरोना संक्रमणबाट विदेशमा रहेका नेपालीहरु भने ५० जनाभन्दा धेरैको मृत्यु भईसकेको खबर छ । यक्ष प्रश्न उठन सक्छ कि सायद ती नेपालीहरु पनि नेपालमै भएको भए शायद मृत्यु नहुने थियो कि ! केही नेपाली चिकित्सकका अनुसार नेपालीहरुको आहार-विहारका विशिष्ट तरिका र प्राकृतिक उपचारका विधिले पनि कोरोना संक्रमण फैलिन नदिएको हुनपर्छ भन्ने विश्वास छ ।
यसरि हालसम्म विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या ३१ लाख ८९ हजार पुगेको छ भने २ लाख २७ हजार मानिसले ज्यान गुमाई सकेका छन ।
अर्थतन्त्र र आर्थिक मन्दी
कोरोना संक्रमणबाटअमेरिकी अर्थतन्त्र सन् २००८ को मन्दी पश्चात सबैभन्दा नराम्रोसंग स्खलित भएको छ । कोरोनाको संक्रमण फैलिन नदिने उपाय अवलम्वन गर्ने सवालमा अमेरिकी स्वास्थ्य निति सफल नरहेको दावी विज्ञहरुले गरेका छन । त्यस्तै अमेरिकाको स्वास्थ्य विमाको निति सर्वसुलभ नगराइएकाले अहिले त्यसरी मर्नेहरुको संख्या अत्यधिक भएको बताईन्छ ।
नेपालमा पनि कोरोनोका कारण रेमिट्यान्स १४ प्रतिशत भन्दा धेरै गिरावट आउने कुरा विश्व बैंकले पूर्वानुमान गरेको छ । नेपालका २१ प्रतिशत आर्थिक क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुने कुरा आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । नेपालका निजी अस्पतालहरु पनि प्राय: सबै बन्द छन् । कोरोनाको यस्तो विगविगिमा पनि राज्यका निजी अस्पतालहरु बन्द हुनुले निजी क्षेत्रको अमानविय नाफा चरित्र उदाङ्गिएको छ । कोरोना पछिको समयमा अनिकालको महामारी आउने निश्चित देखिएको छ । यसरि विश्व अर्थतन्त्र नै चरम आर्थि मन्दीमा फस्ने कुरा विभिन्न संघ-संस्थाले घोषणा गर्दै आएका छन ।
राज्य व्यवस्था नै विभेदमा
त्यस्तै अमेरिकामा मर्नेहरुमा अल्पसंख्यक कालाजातिहरुको बाहुल्यता रहेको छ । सिकागोमा ७० प्रतिशतभन्दा धेरै मारिनेहरू अश्वेत नै थिए जबकि त्यहाँको कुल जनसंख्याको एकतिहाइ मात्र अश्वेत जातिले ओगटेका छन । अहिले पनि भारत लगायतका मुलुकमा सीमान्तकृतहरु नै प्रताडित छन । स्वदेश वा बिदेशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिंदै आएका करोडौं आप्रवासीहरुको पनि बिचल्ली भयो । आप्रवासीहरुहरुलाई सहायोग गर्ने क्रममा राज्यको सहयोग जे जति हुनु पर्थ्यो त्यो शुन्य प्राय: देखियो । यसरी कोरोना सक्रमणको उपचारका क्रममा राज्य व्यवस्था नै विभेदमा उत्रेको संदेश बाहिर आयो । भविष्यमा यस्ता विभेदकारी राज्यका नितीहरुमा सुधार आवश्यक देखिएको छ । सुधार आवश्यक रहेको कुरा नोवेल पुरस्कारले सम्मानित विद्वान अमर्त्य सेनले फ़ाईनान्सियल टाईम्समा हालै प्रकाशित लेखमा औंल्याएका छन ।
मर्ने वेलामा हरियो काँक्रो
यता, मर्ने वेलामा हरियो काँक्रो भने झैं नेपालका श्रममन्त्रिले विदेशमा अलपत्रमा परेका नेपाली श्रमिकहरुलाई स्वदेश ल्याउने तयारि गरिरहेको कुरा बताएका छन ? आज २-३ महिना वित्न लागिसके पछि उद्धारको तयारि भईरहेको छ भनिनु सरासर वदमासी हो । प्रश्न उठनु स्वाभाविकै हो कि सरकार यथा समयमा के हेरेर बस्यो ? कोरोना सक्रमणका वेला रेमिट्यान्स खानेहरुले रेमिट्यान्स पठाउनेहरुलाई जुन प्रकारले अपमानित गरे त्यो अक्षम्य छ । अनि, प्रदेशी नेपालीहरुलाई जे जस्तो समस्या पर्र्यो त्यसको सशक्त आवाज उठाउने क्रममा एन आर एन पनि नराम्रोसंग चुकेको कुरा गुनासो छ ।
यसरी कोरोना संक्रमणका हिसावले नेपालको अवस्था आजसम्म राम्रो देखिए पनि विभेदपूर्ण ब्यवहार गरेको सवालमा नेपाल सरकारको रेस्पोन्स असाध्यै दुखदायी रह्यो । वास्तवमा प्रवासी नेपाली, दैनिक श्रम गरेर गुजारा गरेर जीवन धान्न वाध्य नागरिक, महिला आदिको समस्या सम्बोधन गर्ने सवालमा सरकार नराम्रोसंग चुक्यो । त्यति मात्र हैन कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन लकडाउन गरिरहेका वेला ओम्नी ग्रुपसंग चीनबाट स्वास्थ्य सामाग्री आयात गर्ने सवालमा भएको भ्रष्टाचार, बेमौसमको अध्यायदेश, सांसद अपहरण, कुर्चीको चलखेल जस्ता घिन लाग्दो रबैयाले सरकारको पक्षमा बोल्ने आधार समाप्त भएको छ ।
यसरि अब कोरोना अघि र कोरोना पछिको विश्व बिच फरक हुनुपर्छ । भविष्यमा यस्ता विभेदकारी राज्यका नितीहरुमा सुधार आवश्यक देखिएको छ । व्यवहार फरक हुनु पर्छ । मानिस, प्रकृति र जमिनको सुरक्षाका लागि राज्यको ध्यान जान जरुरि छ । अन्यथा पर्यावरणीय संकट र आर्थिक असमानताका कारणले गर्दा विश्वले अझै दुर्दशा व्यहोर्नु पर्ने छ । कोरोनाले निम्त्याएको विश्व संकटलाई कसरि समाधान गर्ने भन्ने बिषयमा अब साझा छलफल हुन जरुरि छ । कोरोना पछि हामी भेट हुँदा विश्व यस्तै पक्षपाति हुनुहुन्न ।
Tagged आर्थिक मन्दी, कोरोना, प्रवासी नेपाली, विभेदकारी राज्यका नितीहरु
Previous Postनेपालीको रेमिट्यान्स : आधा कमाइ दलाललाई, बाँकी साहूलाई | नेपाल
Next Postसाथी | कविता